नेपाली कांग्रेस धादिङका नेताहरु किन जम्मा भए महाभारत लेकमा ? « Bikas Times
नेपाली कांग्रेस धादिङका नेताहरु किन जम्मा भए महाभारत लेकमा ?
प्रकाशित मिति : 15 November, 2021
नेपाली कांग्रेस अहिले १४औं महाधिवेशनमा होमिएको छ । पटक पटक महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गर्दै, पछि धकेल्दै आएको कांग्रेसले अव भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको छ । यससँगै महाधिवेशनको सरगर्मी जताततै बढेको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन नेताहरु गाउँगाउँमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस गजुरी गाउँपालिका र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा झन्डै दुई हजार नेता कार्यतकर्ता सहभागी भए । गजुरी ४ र बेनिघाट रोराङ १ को सिमानामा पर्ने थमभन्झ्याङमा भएको कार्यक्रममा धादिङ कांग्रेसका सबै नेताहरु सहभागि भए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम पूर्व मन्त्री दिलमान पाख्रिन, नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमला, नेपाली कांग्रेस धादिङका पूर्वसभाति एवम पूर्व साम्सद रामनाथ अधिकारी, निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर एवम नेपाली कांग््रेस धादिङका नेता भीम ढुङ्गाना, नेपाली कांग्रेस धादिङका नेता हरी अधिकारी, शिव सुवेदी, नेता श्याम लामा लगायत अन्य दर्जनौँ नेताहरु सहभागि भएका भएका थिए । मकवानपुरका प्रदेश सभा सदस्य सन्त बहादुर चेपाङ, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका पाँच सय भन्दा बढी नेता कार्यककर्ताहरु अन्य पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।
२०१७ सालको पञ्चायती कु विरुद्ध विद्रोह समेत गरेको कांग्रेसको गौरवमय इतिहास भएको यस क्षेत्रमा पुन कांग्रेसप्रति जनलहर बढेको छ । तामाङ र चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रको बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । यस अघि एमाले र माओवादीले पटक पटक प्रतिनिधित्व गरेको यो क्षेत्र बत्तीमुनीको अँध्यारो अवस्थामा छ ।
झन्डै ३५ बर्षभन्दा बढी यस क्षेत्रमा एकछत्र ँराज गरेको राजेन्द्र पाण्डे अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर यस क्षेत्रका वासिन्दाका लागि भने कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भने जस्तै भएको छ । चुनाव आएपछि गाउँ गएर मिठो भाषण गर्ने अनि निर्वाचित भएपछि जनता विर्षने पाण्डेको व्यवहारका कारण अहिले उनी मुख्यमन्त्री बन्दा पनि यस क्षेत्रका जनताले खासै अपेक्षा गरेका छैनन् ।
गजुरी र बेनिघाट मात्र नभएर यस क्षेत्रका धेरै गाउँहरुमा हालसम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन । कांग्रेस धादिङका नेता एवम पूर्वसामसद रामनाथ अधिकारी, बेनिघाट रोराङ कांग्रेसका सभापति ऋषिनाथ त्रीपाठी, गजुरी कांग्रेसका सभापति भुमि कँडेल लगायत नेताहरुको विशेष पहलमा हाल विद्युत विस्तारको काम अघि बढेको छ । खानेपानी, सिँचाई, सडक विस्तार लगायतका भौतिक विकासका कार्यहरु नेपाली कांग्रेसकै पहलमा अघि बढेको । जसका कारण यस क्षेत्रका जनताहरुको कांग्रेसप्रति भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमविबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदेशभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख
एमाले निर्वाचन मतगणना १ बजेपछि सुरु गर्ने तयारी
सौराहमा जारी नेकपा एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न मतदानको दिउँसो १ बजेपछि मतगणना सुरु हुने